रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले पहिलो पटक मुख खोलिन् ! वास्तविकता यस्तो रहेछ (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले पहिलो पटक मुख खोलिन् ! वास्तविकता यस्तो रहेछ (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:३५
काठमाडौं, ३१ साउन । चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रबि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई प्रहरीले बिहीवार साँझ न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयबाटै प्रहरीले प क्राउ गरेको छ। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आ त्मह त्या प्रकरणको बिषयलाई लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनीहरुलाई प क्राउ गरेको हो।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न लामिछानेलाई चितवन प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताए। कार्यक्रम प्रस्तोता रबिकी श्रीमती निकिता पौडेलले शुक्रबार बिहानै आफनो फेसबुकमा रबि लामिछानेको तर्फबाट भन्दै स्टाटस राखेकी छिन् । उनी चलचित्र बिकास बोर्डकी पुर्व अध्यक्ष समेत रहेकी छिन् । हेर्नुहोस, पहिलो पटक रबि लामिछानेको बिषयमा अभिव्यक्ति दिएकी निकिताले के भनिन् ? भिडियो हेर्नुस
के गर्दा ओली हट्छन् ? के गर्दा प्रचण्ड माकुने थाक्छन ? (भिडियो)
२३ असार २०७७, मंगलवार ११:०५
२३ असार २०७७, मंगलवार ०९:३७
२२ असार २०७७, सोमबार २१:५८
२२ असार २०७७, सोमबार २०:४८